Dr. Tint Swe's Writings: December 2018
နှစ်သစ်အတွက် အိပ်မက်ကောင်းတွေ မက်နိုင်ကြပါစေသတည်း။
မြန်မာစာနဲ့ရေးတဲ့ နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းစာတွေမှာ သတ်ပုံမှန်တာ ခပ်ရှားရှား။ တကို တစ်မလုပ်တာ တခုတိတိ တွေ့လိုက်တယ်။ အဲတာမှာ လျှင်လို့ရေးရမှာကတော့ လျင်ဖြစ်နေတယ်။
အလျင် (အရင်သံထွက်) နှစ်က
တကို မလိုအပ်ပဲ တစ်မရေးတဲ့ ဆုတောင်းစာကို နှစ်သစ်ကူးမှာတွေ့ရတာ မင်္ဂလာ။
ကောက်ညှင်းနဲ့ ငါးခြောက်။ နှမ်းကို ကျွန်တော်က တခါတလေမှသာစားလို့ နေကြာစေ့လှော် (ဒီမှာက အခွံ သင်ထားပြီးသား) ကို ထောင်းပြီးအပေါ်က ဖြူးထားတာ။ မွှေးပြီး ကောင်းတယ်။ ခဏနေတော့ ဗူးသီးကြော်ပန်းကန် ရောက်လာတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လာတယ်။ စားလက်စ အစားအသောက်ပုံအတွက် ကန်တော့ပါ။
သူများကို စားစရာကျွေးရင် အကျန်ကို မကျွေးရပါ။ မစားခင်ကတည်းက လူကြီးကို ဦးချထားရတယ်။ လက်ဆောင်ပေးရင် အသစ်ဖြစ်ရတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ စားသောက်နေတဲ့ပုံတွေ တင်ကြတယ်။ တဝက်တပျက်၊ စားကြွင်းစားကျန်ပုံတွေက မဆီလျော်ပါ။
မနှစ်ကပုံသာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်မှာဘာလာမလဲ မသိ။ နတ်တော်ပဲကို ရေစိမ်ပြီး စစ်ထားတာမြင်ထားတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ တစ်လို့ ရေးဖို့ လိုအပ်သလဲ သိချင်ပါတယ်
ရေတွက်လို့ရတာကို တစ်ရေးလို့ပြောတာ မမှန်။ ဂဏန်ရေးရင် တစ်လို့သင်တာကသာမှန်တယ်။
တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊
တစ်တီတူး၊ (တီတီတူးငှက် ယခင်သတ်ပုံစာအုပ်)၊
တစ်ရှူး (ဆဲလ် အစုအဝေး)၊
တစ်ရှူး (သန့်ရှင်းရေးသုံး စက္ကူ)၊
စောစောက နော်မန်ဗက်သွန်းအကြောင်းကို ခပ်တိုတိုရေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ငယ်ငယ်က သူ့အကြောင်းစာတွေ ဖတ်ပြီး အားကျခဲ့ပါတယ်။ ဆေးကျောင်းမရောက်ခင်ကပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်အဖြစ်ကတော့ အတော်ကြီးကိုကွာတယ်။
နော်မန်ဗက်သွန်းက ဖက်ဆစ်ကိုဆန့်ကျင်သလို ကျွန်တော်က စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ သူက တရုပ်ပြည်မှာ လယ်လုပ်နေသူတွေကို ဆေးကုပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်က အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်နဲ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာလည်း ရောက်တဲ့အခါတိုင်း ဆေးကုပေးပါတယ်။ အားလုံးက မြန်မာပြည်ကဒုက္ခသည်တွေ။ အိန္ဒိယမှာ ၁၂ နှစ်ကြာ ဆေးကုခဲ့တာ။ နယူးဒေလီမှာ။ တောနယ်မှာ မဟုတ်ပါ။ လူနာတွေကလည်း မြန်မာပြည်သားတွေ။
ဓါတ်ပုံ = ၅-၅-၂ဝ၁၁ နေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အိုက်ဇောလ်မြို့နေ မြန်မာရက်ကန်းသမားတွေကို ဆေးကုပေးခဲ့စဉ်က
မင်္ဂလာပါဆရာ ဆီးချိုတိုင်းတဲ့စက်အကြောင်းလေး မေးခွင့်ပြုပါရှင့် ကျွန်မတို့အိမ်က ဆီးချိုတိုင်းတဲ့စက်ကို thada တစိတ်နဲ့ သုံးပါတယ် ဘေးအိမ်ကတော့ g doctor လို့ပြောပါတယ် အဲ့ဒါ သူ့စက်က နေဆီးချို တိုင်းတာ ၁၀၁ လောက်ပဲပြနေပြီ ကျွန်မတို့ အိမ်က စက်နဲ့တိုင်းတော့ 149 လို့ စက်က ပြနေပါတယ် သူ့စက်နဲ့တိုင်းပြီးနာရီဝက် လောက်ကြာမှ ကျွန်မတို့အိမ်က စက်နဲ့တိုင်းတာပါ အဲ့လိုတိုင်းတဲ့အချိန်ကြားထဲ ဘာမှမစားပါဘူး မတိုင်းခင်လဲ မစားထားပါဘူး အဲ့ဒါကို ကွာနေလို့ ဘယ်စက်က အဖြေမှန်မလဲ မသိပဲ အဲ့လိုပဲ ဖြစ်တတ်တာလား ဆီးချို စက်တွေကို ယုံသင့်ရဲ့လား မသေချာ လို့ ဆရာဆီကို မေးကြည့်တာ ပါကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါဦးနော်
ဆီးချိုဆိုတာ အချိန်တိုင်း ပြောင်းလဲနေတယ်။ စက်ကရိယာတွေက မတူကြပါ။ သွေးဖိအားတိုင်းတာတွေမှာလည်း မတူကြပါ။ ဆောရီး။
ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းလိုရတဲ့အဖြေနဲ့ ကိုယ့်အိမ်သုံးစက်ကအဖြေဟာ ၁၅% သာကွာရင် လက်ခံသင့်တယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်တယ်။
ယူအက်စ်အေမှာ အသင့်မှန်ဆုံး ဆီးချိုတိုင်းစက်တွေကတော့
Accu-Check Smart View တွေဖြစ်ပါတယ်။
မေးတာကို ဖြေပြီးပြီ။ သတ်ပုံပြင်ဦးမယ်။ တစိတ် မဟုတ်။ တံဆိပ်လို့ရေးရတယ်။
ကျော်အောင်ရေးတဲ့စာအုပ်မှာ မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်နဲ့သာ ရေးထားကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ သတ်ပုံဖျက်ခံထားရတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ နော်မန်ဗက်သွန်းရေးထားခဲ့တာတွေက မှန်နေဆဲပါ။
ဥရောပနိုင်ငံတခုမှာနေတဲ့သူက မေးတယ်။ မြန်မာပြည်ထဲမှာနေတဲ့ သူ့အကိုမှာ ဆီးချိုရှိနေလို့တဲ့။ ဆရာဝန်ဆီတခါသွား (၃) သောင်းလောက် ဝေါကနည်းကုန်တဲ့ခေတ် ဆရာရဲ့။ ဆေးရုံတက်ဆို သိန်း (၃ဝ) တဲ့။
ကျွန်တော် ၁၉၇၃ ခုနှစ် မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာ အလုပ်သင်ဆရာဝန်လုပ်နေစဉ်က (၁၄) လမ်းမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်ဌာနမှူးတဦးရဲ့ ဆေးခန်းလေးကို သူမအားတဲ့ရက်မှာ သွားထိုင်ပေးရတယ်။ ဆေးတလုံးထိုးရင် (၃) ကျပ် ယူတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီထဲကနေ ကော်မရှင်ရတယ်။
ပုံပြင်ဆိုတာလည်း (၃) မျိုးရှိတယ်။
တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေ တစိတ်တပိုင်းပါတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ စတိုရီတဲ့။
မေးတဲ့သူဆီ ဆီးချိုစာ (၃) ပုဒ်ပို့လိုက်တယ်။ စုစုပေါင်း ၃ိ/ ကျတယ်။
ဒီစာရေးထားတာ (၃) နှစ်ကဆိုတော့ သုံးဆတိုးနေပြီလားတော့ မသိပါ။
ကနေ့ ခပ်ဆန်းဆန်း နှစ်ခုလာတယ်။ တခုက မေတ္တာစာလေးပါတဲ့။ အသံဖိုင်။
မေတ္တာစာဆိုတာ ရှေးဘုရင်တွေခေတ်ကတည်းကပေါ်တာ။ ပေါ်စမှာ ရဟန်းတော်တွေ စာဆိုတွေကနေ ဘုရင်ကို ဆက်သွင်းကြတယ်။ နောက်တော့ မေတ္တာရပ်ခံစာသဘောပါ ရေးကြတယ်။ ရှင်မဟာသီလဝံသ၊ ရှင်မဟာရဋ္ဌဌသာရ၊ ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော်၊ ကျည်းကန်ရှင်ကြီး၊ ရှင်ဥက္ကံသမာလာနှင့် စလေဦးပုည၊ ကင်းဝန်မင်းကြီး အစရှိသူတွေရေးခဲ့တာတွေက မြန်မာစာပေသမိုင်းတင်ရစ်တယ်။ နောက်တခါ ချစ်ခင်ကြသူတွေအတွက် ရေးလာကြတယ်။ နောက်ပိုင်းခေတ်မှာ သမီးရည်းစားစာကိုလည်း မေတ္တာစာလို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးခေါ်ကြတယ်။
နောက်အဆန်းတခုက အသံဖိုင်ပို့ပြီး နားဆင်ကြည့်ပါတဲ့။ ကျွန်တော်က အသံဖိုင်တွေ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို မဖွင့်ပါ။ နေမကောင်းလို့ မေးတာလားတော့ မသိ။
နောင်တသက်လုံး မပို့ပါရန်စာနဲ့ပုံလေးကို အခုထိ လူ ၅၀ ကျော်ဆီပို့ရပြီးပြီ။ ၄-၅-၆ ယောက်က တောင်းပန်တယ်။ အကြောင်းပြချက်တွေက မတူကြပါ။ တယောက်ကတော့ အတ္တတဲ့။
အတ္တဆိုတာ ပါဠိစာလုံး။ မြန်မာစကားထဲမှာလည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးပါတယ်။ ဘုရားဟောကြားခဲ့တာတွေကို ပါဠိလိုရေးသားပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ ဘာသာအမျိုးမျိုး ပြန်ကြတယ်။ တချို့စာလုံးတွေကို ဘယ်ဘာသာနဲ့မှ အတိအကျ ဘာသာပြန်မရပါ။ အဲလိုစာလုံးတွေထဲမှာ ဒုက္ခ နဲ့ အတ္တ ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက ပဌမဦးဆုံး ဓမ္မစကြာတရား၊ နောက်မှာ အနတ္တလက္ခဏာသုတ် ဟောပါတယ်။
ပါဠိစာလုံးတွေကို နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီယော်လော်ဂျီထဲမှာ ထည့်ရေးကြတာတွေရှိတယ်။ ဘာသာစကားမတူတဲ့စာတွေကို ဘာသာပြန်တာမှာလည်း ထည့်သုံးကြတာတွေရှိတယ်။ ပါဠိစာကို ဗုဒ္ဓဘာသာမူပိုင်လို့တော့ ပြောမရပါ။
မြန်မာစာဖတ်တဲ့ ပြောတဲ့သူတွေက အများအားဖြင့် ဘာသာရေးအဓိပ္ပါယ်လားလို့ အရင်ဆုံးစဉ်းစားလေ့ရှိကြတယ်။ စဉ်းစားတာ မမှားပါ။
အတ္တလို့ရေးတဲ့ ပြောတဲ့သူ တကယ် အတ္တကို သိသလား စိတ်ထဲကနေ မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်။ မေးခွန်းထုတ်သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျွန်တော်လိုပဲ စာတွေ့သာသိသူတွေက များမယ်ထင်ပါတယ်။ စာတွေ့တောင်မှ ယောင်ဝါးဝါးက ပိုများမယ်ထင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျန်းမာရေးအမှု မဟုတ်ပါ။ phone ကို ဖုံး (သို့) ဖုန်း ဘယ်အသုံးက အခုခေတ်အတွက် မှန်မလဲ သိချင်ပါတယ်။
အဲလို ဘာသာခြားစကားကနေ ဘာသာပြန်တာမျိုးမှာ စံကိုက်သတ်ပုံရယ်လို့ မရှိပါ။ အသံထွက်ကိုသာ အနီးစပ်ဆုံး ယူပါတယ်။ ဖုန်းရော ဖုံးပါ အသံထွက်တူတယ်။
အသံထွက်မတူအောင်ရေးရင် မှားမယ်။ အမှားဥပမာတွေ များတယ်။
TB ကို တီဘီလို့ ရေးမှသာ မှန်တယ်။ တီဗွီ မှားတယ်။ တီဗီ မှားတယ်။
Ultrasound ကို အာထွာဆောင်း ဒါမှမဟုတ် အာလ်ထွာဆောင်းလို့ရေးမှသာ မှန်တယ်။ အာထွာစောင်း မှားတယ်။
Computer ကိုကွန်ပြူတာလို့ရေးရေး ကွန်ပြူတာရေးရေး မမှားပါ။
Cell phone ကို ဆဲဖုန်း ဒါမှမဟုတ် ဆဲလ်ဖုံးလို့က နီးစပ်ပြီး စဲ နဲ့ စဲလ် ဆိုရင် မမှန်လောက်ပါ။
Super ကို စူပါ မမှန်။ ဆူပါမှသာ နီးစပ်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ထိပ်တန်းပညာရှင်တွေစုပေါင်းရေးသားထားတဲ့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းရှိတယ်။ နှစ်ကြာလာတော့ အဲဒီထဲက အရေးအသားတချို့နဲ့ စာလုံးတချို့ကို ပြောင်းရေးလာကြတယ်။ ဥပမာ -
- ဂျူးလယပ်ဆီဇာ = ဂျူလီယက်ဆီဇာ
- ဆအူးဒီအာရေဗျ = ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား
- ဆိုက်ဗီးရီးယား = ဆိုက်ဗေးရီးယား
- ယန်ဆီမြစ် = ယန်စီမြစ်
- ရှီကာဂိုး = ချီကာဂို၊ ရှီကာဂို
- ဗဲလဂျီယမ် = ဗယ်လဂျီယန်
- ကွန်မျူနစ် = ကွန်မြူနစ်
ဘိုသံထွက်လွန်းတာလည်း သတိထားရသေးတာ။ ဖေ့စ်ဘွတ် ကို ဖေ့ဘုတ် လုပ်တာတော့ သဘောမတူနိုင်။ အဖေ့စာအုပ် မှတ်မယ်။ အဖေဆိုတာ လူတိုင်းမှာ တဦးတည်းသာရှိတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်က လူတိုင်းမှာ။
အခုတော့ အသံတွေပေးပြီး မိုးတွေရွာနေတယ်။ စောစောကတော့ ဘဲငန်းတွေ လာကြတယ်။ ဒီနှစ်ကူးမှာ နှင်းမရှိပါ။
မိုးခိုစရာ နေရာ၊ နှင်းခိုစရာ နေရာ၊ ငန်းတွေ ထိုင်ကြည့်စရာ နေရာကနေ မိုးထဲ ရေထဲ လေထဲ လူအုပ်ထဲမှာ သွားလာ လှုပ်ရှား အလုပ်များနေကြမဲ့သူတွေကို သတိရနေတယ်။
ဖြောင့်တန်းစွာသွားလာတတ်တဲ့ ဘဲငန်းတွေ ဘေးမသမ်း အေးချမ်းကြပါစေ။
မနှစ်က ဒီနေ့မှာ မွန်မိသားစုရဲ့ အိမ်သစ်တက်ဖိတ်လို့ နှင်းတောထဲမှာ စားဖို့သောက်ဖို့သွားပါတယ်။ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ရေနွေးကြမ်းပြီးတော့ မုံ့ဟင်းခါးနဲ့ ကောက်ညှင်းဘိန်းမုံ့စားခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းတယ်။
ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ဦးထုပ်က ကျောင်းမှာလက်ဆောင်တွေ အလဲအလှယ်လုပ်စဉ်က ရထားတဲ့လက်ဆောင်ပါ။ ဒိုမီနီကန်နိုင်ငံကနေ လာနေကြတဲ့စုံတွဲက ပေးတာ။
ဒီမှာက လူနာမည်ကို ပဌမစာလုံးကို ခေါ်လေ့ရှိကြတယ်။ တချို့ကသာ ကျွန်တော့်ကို ဆရာဝန်လို့ သိကြပါတယ်။ ကနေ့ ဆိုင်းဘုတ်ပါတဲ့ ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး ရှိုးထုတ်လိုက်တာ။
၂၀၁၉ မှာလည်း မတောင်းမတ မကြောင်းမကျ ဘဲ လိုအင်ဆန္ဒတွေအားလုံး ပြည့်စုံသော် နှစ်ဖြစ်ပါစေ ဆရာ
လက်နဲ့ရေး ဆုတောင်းတာမျိုးတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ သတ်ပုံလည်းပြင်မယ်။ မကြောင့်ကြလို့ ရေးရတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ သားဖွားမီးယပ်ပညာနဲ့ သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကို OG လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ယူအက်စ်အေမှာက သားဖွားမီးယပ်ပညာကို OB-GYN တဲ့ ဆရာဝန်ကို OB တဲ့။
ကျွန်တော်လို ရိုးရိုးဆရာဝန်တွေက ဆေးပညာဘွဲ့တခုတည်းသာရကြတယ်။ ဘွဲ့ကတခုတည်းပေမဲ့ နှစ်မျိုးပါတယ်။ MB က ဆေးပညာဝိဇ္ဇာဘွဲနဲ့ BS က ခွဲစိတ်ပညာဝိဇ္ဇာဘွဲ့။ ဆရာဝန်တွေ MBBS ဘွဲ့ရပြီးနောက်မှာ တယောက်တမျိုးစီ ဖြစ်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်လို ရတဲ့ဘွဲ့လေးတခုနဲ့ အရိုးထုတ်ကြရသူကများတယ်။ အဲလိုဆရာဝန်တွေထဲမှာလည်း ဆေးကုတာ အားသန်သူနဲ့ ခွဲစိတ်တာမှာ စိတ်ပါသူလို့ မတူကြပြန်ဘူး။ ကျွန်တော်က အစုံသုပ်လုပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်က ဒေါက်တာဆင်သီယာမောင် ဆေးခန်းရောက်တိုင်း ခွဲစိတ်ခန်းဝင်ပေးသေးတယ်။ ကေအင်န်ယူခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မြရွာမှာရှိတဲ့ ဆေးရုံလေးမှာလဲ ခွဲစိတ်ပေးဘူးတယ်။ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ချောင်းကလေးဘေးမှာ ပါတီစည်းရုံးရေးမှူးတယောက်ကို အစည်းအဝေးနာချိန်မှာ မိုင်နာဆာဂျရီ လုပ်ပေးဘူးတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အိုက်ဇောမှာလဲ မြန်မာယက်ကန်းသမားတွေကို ခွဲစိတ်တာအပါအဝင် ဆေးကုပေးတယ်။ တမူးဟိုဖက်က မိုးရေးဆေးခန်းလေးမှာလည်း အဲလိုဘဲ။ ဒေလီမြို့ ယမုန်နာဆေးခန်းမှာလည်း အတော်များများခွဲစိတ်ခဲ့တယ်။
၁၉၈၁ တုန်းက ရန်ကုန်မှာ တနှစ်တည်း ဆေးကျောင်ဆင်း သူငယ်ချင်းတွေစုဝေးခဲ့တုံးက ကျွန်တော့်လက်နဲ့ ခွဲတာကိုခံရဲတဲ့ သတ္တိအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်က ပြန်ပြောမှ အဲတာကိုအမှတ်ရတယ်။
အစစအရာရာရှာပါးလွန်းလှတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကြီးထဲမှာ တိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးရတော့ ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းထားခဲ့တဲ့ ခွဲစိတ်ကိရိယာတွေကိုပါ ထားခဲ့ရတယ်။ နှမြောလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့။ ဒေလီကို ရောက်တော့ ခွဲစိတ်လူနာတွေ တွေ့ပြန်တဲ့အခါ လက်နက်သာရှိပြီး ကျည်ဆံမရှိပြန်လို့ ခွဲစိတ်ကိရိယာတွေ ပြန်စုရပြန်တယ်။
ဒေလီက ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းတခုမှာ ဗိုက်ခွဲမွေးပေးတာတွေလုပ်တော့ အိုဂျီဘွဲ့ရ ကုလားမဆရာဝန်က အဆစ်စ်လုပ်တယ်။ Smile! ဒေလီ ယမုန်နာဆေးခန်းမှာ ကလေးပေါင်း ၃၅ဝ ကို မွေးပေးလို့ အိုဂျီလို့ အမှတ်မှားနေကြတယ်။ အမှန်က အိုပြီ ဆရာဝန်ပေါ့ဗျာ။ လက်မတုန်သေးပါ။ စိတ်မကုန်သေးပါ။
တောမုံ့ဆီကြော်နဲ့ ပဲခွေတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ ကြော်ကြတာ။ အခုဆုတောင်းတာတွေက အင်တာနက်လမ်းပေါ်က ကောက်လာတာတွေ။
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ သတ်ပုံကိစ္စ အဓိကမဟုတ် ဆရာ ကျန်းမာပျော်ရွှင် နိဗ္ဗာန်မြင်ရင် ကျေနပ်လျက် တဲ့။
တခုတည်းထင်မှတ်၊ မျှင်မပြတ်လျှင်၊ ပညတ်ပင်။ အများထင်မှတ်၊ အမျှင်ပြတ်မှ၊ ပရမတ်။
တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ သတ်ပုံမှန်မှ တရားလည်းမှန်၏။ သတ်ပုံဇောက်ထိုးနဲ့တော့ နိဗ္ဗာန်ကို အတည့်မြင်မယ် မထင်ပါ။
အသက် ၂၄ပါရှင့် မ ပါ ငါးပိရည်တို့ အမဲသားတို့စားရင် သုပ်ထိုးပါတယ်ရှင့် ဘာကြောင့်လဲရှင့် အဒါစားမှ ထိုးတာ ဘာဆေးသောက်ရမလဲရှင့်။
မေးခွန်းကို သိပ်နားမလည်ပါ။ သုပ်ဆိုတာ စေပါလက်သုပ် (အစေအပါး)၊ ပေါင်းမြက်သုပ်သင်၊ ဟင်းလျာလက်သုပ်၊ လက်ဖက်သုပ်၊ အသုပ်စုံမှာသာရေးတယ်။
တုပ်ဆိုတာ တုပ်ကွေး၊ တုပ်ကွရိုသေ၊ တုပ်တုပ်ကွကွ၊ တခါးမင်းတုပ်၊ ချည်နှောင်တုပ်၊ ပတ်ကြမ်းတုပ်သည်၊ ပုဆစ်တုပ်၊ သန်းဥတုပ်၊ ပုစွန်တုပ်၊ ပျားတုပ်၊ ကင်းတုပ်မှာ ရေးရတယ်။
သန်ကောင် တုတ်ကောင်လား စဉ်းစားရတယ်။ ဆရာဝန်ဆိုတာ ရမ်းမဖြေရ။ ရမ်းပြီးဆေးမပေးရပါ။
သန်ကောင် တုတ်ကောင်ထိုးတာဆိုရင် အစာလမ်းမှာရှိနေတယ်။ နောက်ထပ်ဘာစားစား မစားစား၊ သန်ချဆေး စနစ်တကျ မသောက်ရင် ထိုးနေမှာသာဖြစ်တယ်။
Terrible Books Written by Dictators အာဏာရှင်တို့၏ ကြောက်စရာကောင်းသောစာအုပ်များ
သုတေသနစာတမ်းတခုကို ကိုးကားရေးပါရစေ။ Stalin စတာလင်ရေးခဲ့တာ The Foundations of Leninism စာအုပ်။ Hitler ဟစ်တလာရေးတာ Mein Kampf စာအုပ်၊ Mussolini မူဆိုလီနီရေးတာ My Life စာအုပ်နဲ့ Mao မော်စီတုန်းရေးတာ Little Red Book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဟစ်တလာဟာ သူ့ကိုယ်သူ စာရေးကောင်းသူမဟုတ်မှန်းသိပါသတဲ့။ Mein Kampf စာအုပ် ၂ တွဲရေးခဲ့ပါတယ်။
စတာလင်ဟာ ငယ်စဉ်က Iveria ဂျာနယ်မှာ ကဗျာတွေရေးခဲ့သူဖြစ်တယ်။
မူဆိုလီနီရေးတဲ့ စစ်တွင်းဒိုင်ယာရီကတော့ ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပဌမကမ္ဘာစစ်နောက်ခံဖြစ်တယ်။
Saddam Hussein ဆဒမ်ဟူစိန်ကလည်း Zabiba and the King အချစ်ဝတ္ထုရေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ကျူးဘားအာဏာရှင် Fidel Castro ဖီဒယ်ကက်စထရိုက Ernest Hemingway ဟယ်မင်ဝေးရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်ပါတဲ့။ အဲဒီနိုဗယ်ဆုရှင်နဲ့ ၂ ကြိမ်တွေ့ပြီး၊ သူ့စားပွဲမှာ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပုံထားတယ်။ သူက အရေးသမားမဟုတ်။ အပြောသမား။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တုန်းက ကုလသမဂ္ဂမှာ ၄ နာရီနဲ့ ၂၉ မိနစ်ကြာမိန့်ခွန်းပြောခဲ့တယ်။ သူ့တိုင်းပြည်က လူတွေဆိုရင် ဒိထက်ပိုကြာအောင် မိန့်ခွန်းချွေပါတယ်။
Chairman Mao ဥက္ကဌကြီးမော်က ၁၉၆၀ ကျေ်ာတွေမှာ chart-topping pop ပေါ့ပ်သီချင်းတွေ ကြိုက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူကလူငယ်သာရှိသေးတာ။ ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုဦးဆောင်ချိန်မှာ ချီတက်ပွဲကြီးလုပ်တော့လည်း တေးဂီတနဲ့ စာပေကို လက်နက်အဖြစ်သုံးစေခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၆ ကစပြီး သူ့ရဲ့ Little Red Book စာအုပ်နီလေးဟာ လက်စွဲဖြစ်လာတယ်။ မြန်မာပြည်အထိရောက်ခဲ့တယ်။
မြောက်ကိုရီးယား အာဏာရှင် Kim Jong-il ကင်မဂျုံအီးလ်ကလည်း ရုပ်ရှင်ဝေဘန်ရေးသမားဖြစ်ပါသတဲ့။ On the Art of the Cinema စာအုပ်ရေးခဲ့တယ်။
လစ်ဗျားအာဏာရှင် Muammar Gaddafi မော်မာကဒါဖီက The Green Book စာအုပ်ရေးပါတယ်။ သူ့စာအုပ်ထဲမှာ သားဖွားမီးယပ်ပညာပါတယ်။ မိန်းမတွေ လစဉ်ရာသီဆင်းတယ်။ ရာသီမလာတော့ရင် ကိုယ်ဝန်။ ယောက်ျားတွေက အဲလို မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့မိန်းမတွေ တနှစ်လောက် အက်တစ်မဖြစ်ကြတော့ဘူးတဲ့။
ဆရာဝန်တွေက ဆေးစာရေးရင် အတိုကောက်စာလုံးတွေကို သုံးတယ်။ တကမ္ဘာလုံးကဆရာဝန်တွေက သုံးပါတယ်။ ဆေးဆိုင်တွေကလည်း ဖတ်တတ်တယ်။ မြန်တယ်။ တိကျတယ်။
စိတ်ကျရောဂါဆေး၊ အလာဂျီဆေး၊ ရင်ပူဆေးတွေကို တနေ့မှာ တကြိမ်တည်းသာ သောက်ရတယ်။
ရီဖမ်ပစ်စင် ခေါ် တီဘီဆေးကို အစာမစာမီသောက်ပါ။
ကိုယ်ဝန်တားဆေးကို နေ့စဉ် အချိန်မှန်သောက်ပါ။
ဗီတာမင် အေ၊ ဒီ၊ အီး၊ ကေဆေးတွေကို အဆီပါတဲ့အစားအစာနဲ့အတူသောက်ပါ။
ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုဆေး မနက်တကြိမ် ညနေတကြိမ်သောက်ပါ။
ဗီတာမင်စီကို မနက်တကြိမ် ညနေတကြိမ်သောက်ပါ။
ငါးကြီးဆီကို မနက်တကြိမ် ညနေတကြိမ်သောက်ပါ။
ပရိုဘိုင်အောတစ်ဆေးကို အစာမစာမီ မိနစ် ၃၀ ကြိုတင်သောက်ပါ။
မြန်မာလိုရေးရင်လည်း တိုတာ မြန်တာ မှန်တာရေးပါတယ်။ တနေ့တကြိမ်။ တညတပြား။ ခုခေတ် စာရေးဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာတွေလိုရေးနေရင် ရောဂါနဲ့ဆေးတွေ့ဘို့ အချိန်ပိုကြာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်က ကျောင်းတွေမှာ ပြဋ္ဌာန်းတယ်။ ဒေါင်းဘတ်စာလို့ အလွယ်ခေါ်ကြတယ်။
တလောက ခွပ်ဒေါင်းတွေ ပြန်ဆုံကြတဲ့ပွဲဖိတ်စာမှာ ဒို့တစ်တွေလို့ ရေးတယ်။
ကျောင်းသားမဟုတ်သူတွေကို ကဒေါင်းတွေလို့ ပြောလေ့ရှိတယ်။ သူတို့ကလည်း တို့တစ်တွေတဲ့။
တနေ့က ဆေးမန်းကသူငယ်ချင်းတွေပြန်ဆုံကြတဲ့ပွဲမှာ တို့တတွေလို့ ရေးတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ဒေါင်းဘတ်စာအုပ်စု။
ဒီမိုကရေစီရေးဆိုတာ တကို တစ်ရေးခိုင်းတာကိုးလို့ သဘောပေါက်သွားတယ်။
သတ်ပုံအမှားတွေပါတဲ့ ဆုတောင်းစာတွေ ရာသီတိုင်းမှာ လာတယ်။ သင်္ကြန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ နှစ်သစ်ကူး။
နှစ်ကူးပြောင်းတော့မဲ့ ဒီဆောင်းရာသီမှာ🎵 ✨
ကြံစည်လို့သာ ရေးရတယ်။ စဉ်တိုက် ဆက်တိုက်၊ စီစဉ်သည်၊ ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ၊ လွင့်စဉ်၊ သွားစဉ်လာစဉ်၊ အစဉ်မပြတ်၊ အစဉ်အလာ၊ အစီအစဉ်၊ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း။
လှူဒါန်းသည်၊ ပေးလှူသည်၊ အလှူတော်၊ အလှူအတန်း၊ အလှူဒါန လို့ရေးရတယ်။ နာမ် နဲ့ ကြိယာ အသုံးမတူပါ။
အမှားတွေ မဝေသင့်။ အမှားတွေ မရေးသင့်။ အမှားတွေ နှစ်သစ်မှာ ယူမလာသင့်ကြပါ။ အဲတာ ကျွန်တော့် ဆုတောင်း။
နောက်တသက်လုံး ဘယ်တော့မှ မပို့ပါရန်
အခုတလော တယောက်ပြီးတယောက် ဆရာတော်ကြီးတပါးစာဆိုပြီး ပို့နေကြတယ်။ တစ်သတ်ပုံတော့ မပြောလိုတော့ပါ။ ၉၉% က ကျွန်တော်နဲ့သဘောမတူကြလို့။ မဲ နဲ့ မည်းလည်း မှားနေတယ်။
တစ်လို့ရေးသူတွေ ဇော်ဂျီထက် တော်သည်မထင်ပါ။
ဆရာရှင့် ကျမ အသက် ၂၆နှစ်ပါ အိမ်ထောင်သက် 8လ ရှိပါပြီ 17.7.2018 နေ့မှာ ကျွန်မ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်လို့ နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီနေ့မှာ အန်ထွာဆောင်း ရိုက်တော့ ကလေး နှလုံးခုန်နှုန်း၁၈၀ ဖြစ်နေပါတယ် 22.7.2018 တွင် ၁၄ပတ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်အား ကလေးနှလုံးခုန်ရပ်လို့ သားအိမ်ခြစ်ခဲ့ရပါတယ် သန္ဓေသားရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း အမှန်က ဘယ်လောက်ရှိသင့်ပါသလဲရှင့် မိခင်ရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကရော ပျမ်းမျှ ဘယ်လောက်ရှိသင့်ပါသလဲရှင့်
ကိုယ်ဝန်မှာ အထဲကကလေးနှလုံးခုန်နှုန်း ၁၂ဝ ကနေ ၁၆ဝ အထိရှိတာပုံမှန်။ ကိုယ်ဝန် ၆ ပတ်ရရင် စပြီး တိုင်းတာနိုင်။ ၁ဝ ပတ်ရရင် ၁၇ဝ အထိရှိလာနိုင်။ မွေးကာနီးမှာ ၁၃ဝ ရှိတတ်။
၃ ပတ်ဆိုရင် သန္ဓေသားနှလုံးစလှုပ်နေပြီ။ ၆ ပတ်ထက်မစောမှသာ အာထွာဆောင်းကနေသိနိုင်တယ်။ တမိနစ်မှာ ၁၀၀၊ ၁၂၀ ကနေ ၁၆၀ ရှိမယ်။ ၁၀ ပတ်ဆိုရင် ၁၇၀ အထိတိုးလာမယ်။ ၁၄ ပတ် ၁၅၀၊ ၂၀ ပတ် ၁၄၀ နဲ့ မွေးကာနီးတော့ ၁၃၀ ဖြစ်မယ်။
မွေးကာစ = 125 beats/min (70 to 190 beats/min)
တနှစ်အောက် = 120 beats/min (80 to 160 beats/min)
၃-၄ နှစ်အရွယ် = 110 beats/min (80 to 130 beats/min)
၆ နှစ်အရွယ် = 100 beats/min (75 to 115 beats/min)
၈ နှစ်အရွယ် = 90 beats/min (70 to 110 beats/min)
၁ဝ နှစ်အရွယ် = 90 beats/min (70 to 110 beats/min)
၁၂ နှစ်သမီး = 90 beats/min (70 to 110 beats/min)
၁၂ နှစ်သား = 85 beats/min (65 to 105 beats/min)
၁၄ နှစ်သမီး = 85 beats/min (65 to 105 beats/min)
၁၄ နှစ်သား = 80 beats/min (60 to 100 beats/min)
၁၆ နှစ်သမီး = 80 beats/min (60 to 100 beats/min)
၁၆ နှစ်သား = 75 beats/min (55 to 95 beats/min)
၁၈ နှစ်သမီး = 75 beats/min (55 to 95 beats/min)
၁၈ နှစ်သား = 70 beats/min (50 to 90 beats/min)
နှလုံးဟာ တမိနစ် 72 ကြိမ်၊ တနာရီ 4,320 ကြိမ်၊ တနေ့ 103,680 ကြိမ်၊ တနှစ် 37,843,200 ကြိမ်၊ အသက် ၂ဝ မှာ 756,864,000 ကြိမ်ခုန်တယ်။ ကျွန်တော့်နှလုံးက 2,649,024,000 ကြိမ်ခုန်ပြီးပြီ။
ဆက်ကာ ဆက်ကာ ပြောင်းခဲ့ပြီ။
မှန်တိုင်း မဟုတ်၊ အလုပ်မျက်နှာ
ဆရာတင်မိုး ချင်းတိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုမဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာ။ ပုဂံကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံစာအုပ်မှာ ပါတဲ့အတိုင်း ကူးယူတင်ပြပါတယ်။ ဆရာရေးတဲ့ မြန်မာစာသတ်ပုံကို လေ့လာကြစေလိုပါတယ်။
ဆရာတင်မိုးကဗျာပေါင်းချုပ်စာအုပ်အထူကြီးထဲမှာ ဆရာ့ကဗျာတွေကို တစ်တွေနဲ့သာရိုက်နှိပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဒေလီမှာတွေ့ကြတော့ ဆရာက တကို တစ်လုပ်နေကြတာကို ပြောမသွားပါ။ အရွယ်ကြီးမှ၊ လူမုန်းမခံမခံပါရစေနှင့် လောကဆိုတာ သည်လိုပေါ့ကွယ်လို့ သူ့ကဗျာမှာ ဖြေထားပြီးသားကိုးလို့ နားလည်ရပါတော့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ကား အသက်ကြီးပြီး လူမုန်းခံနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းလောက် သတ္တိမကောင်း။ ဆရာတင်မိုးလို မနူးညံ့ပါတကား။
တချို့က ဘုရားရှစ်ခိုးပြီးလို့ ရေးကြတယ်။ မှားနေတယ်။ ဘုရားရှိခိုးလို့သာ ရေးရတယ်။ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်မြောက်အောင်လည်း မှားတယ်။ တကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်မြောက်အောင်လို့ ရေးရတယ်။
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကတည်းက ပုံဆွဲဝါသနာပါတယ်။ အသက်လုထွက်ပြေးရတော့ တခြားဟာတွေနဲ့အတူ ဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့ ပန်းချီပုံလေးတွေ သယ်မလာနိုင်တဲ့အတွက် ခုထိစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်တုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့ ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းပုံကို မနှစ်က ဒီနေ့မှာ ပြန်တွေ့ရတယ်။
အမေ့ရွာ ပုလဲမြို့နယ်၊ မင်းတိုင်ပင်ဆိုတာ ကင်းဝန်မင်းကြီးရဲ့ရွာပါ။ အမေကဦးကောင်းရဲ့မြေးတော်တယ်။ ဦးကောင်းမှာ သားသမီးအရင်း မထွန်းကားပါ။ အရင်က (မုံတိုင်ပင်) လို့ ရာဇဝင်စာအုပ်တွေမှာ ရေးတယ်။ ငယ်ငယ်တုံးက ကင်းဝန်ရဲ့အမျိုးလို့ ကြွားချင်ခဲ့တယ်။ မုံရွာ အထက (၂) မှာ ၉ တန်း၊ ၁ဝ တန်းတုံးက ကင်းဝန်နွယ်ဘာညာဆိုပြီး ကလောင်နာမယ်ယူခဲ့ဘူးတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ပန်းချီဆွဲပြီး၊ မြန်မာစာဆရာ ဘုတလင်ချစ်လေးက ကြီးကြပ်ပေးတဲ့ ပုလဲသွယ်နံရံကပ်စာစောင်မှာ တာဝန်ယူရဘူးတယ်။ ဆရာ့ကိုရော၊ သူငယ်ချင်းတွေပါ အမှတ်ရလို့ ကျွန်တော့် နိုင်ငံရေးဘလော့ခ်ကို ပုလဲသွယ်လို့ နာမည်ပေးခဲ့တယ်။
ကယားပြည်ကို သီးခြားပြည်တခုအဖြစ် သီပေါမင်းကိုယ်စား လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းလို့ ကယား-ကယန်း-ကရင်နီတွေကသူများတွေထက် သိကြတယ်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးကို အဲလိုအမြင်ရှိသူတွေ အကဲဖြတ်တာကိုရော၊ ဦးကောင်းလိမ်ထုတ်ဆိုတာရော၊ နှစ်ခုလုံးကို သူ့အမျိုးတွေက အမွေခံရမှာပါ။
မင်းတိုင်ပင်ရွာက ဦးကောင်းကောင်းမှု ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ငယ်ငယ်ကဆော့ကစားဘူးတယ်။ မယ်မင်းဆီ အုတ်ဂူလေးလဲ ခြုံနွယ်တွေကြားထဲမှာ သွားကြည့်ဘူးသေးတယ်။ ယက်သွား (ရက်ကန်းသုံး) ရောင်းခဲ့တဲ့ အမျိုးလို့လဲ သိရတယ်။ ကျွန်တော့်အမေရဲ့ အဖေဦးထင်က မင်းတိုင်ပင်တိုက်နယ်သူကြီး။ သူဆုံးတော့ မုံရွာမှာပါ။ ဆောင်းတွင်းမှာ ကျွန်တော့်အစ်ကိုကြီးနဲ့ နှစ်ယောက်သား သစ်ကိုင်းခြောက်လေးတွေကို ဘကြီးမီးလှုံဘို့ ဆွဲယူသွားခဲ့ကြရတာ မှတ်မိနေသေးတယ်။
ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ တောင်သမန်အင်းက လေညှင်းဆော်တော့ထဲမှာ ရေးထားတာကိုတော့ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းထက် နှစ်သက်ပါတယ်။ သန်းဝင်းလှိုင်ရေးတဲ့ လူအများစု အမှတ်မှားနေတဲ့ ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းအကြောင်းကို သမိုင်းအမှန်သိစေချင်မှာ ပိုပြီးစုံစုံလင်လင်ဖတ်ရတယ်။
ဦးကောင်းမွေးနေ့ နှစ် (၁၄ဝ) မှာ ဦးလေးတယောက်ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ မင်းတိုင်ပင်မှာ ပွဲတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်က ဆေးကျောင်းသားပဲရှိသေးတာ။ မြန်မာနှစ် ၁၃၃၂ ခုကပါ။ ဦးကောင်းရဲ့ ဇာတိရပ်မြေ မင်းတိုင်ပင်ရွာမှာ ကျင်းပပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ပုံလေးကို အဲဒီပွဲအတွက်ထုတ်တဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်မှာ သုံးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ပန်းချီလက်မှတ်လည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တာဆိုလို့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဝါဝါဝင်းရွှေပုံနဲ့ အခုပုံသာကျန်တော့တယ်။ ရေဆေးပုံတွေက ခြကိုက်သွားပြီတဲ့။
ပြည်တစ်နယ်နိုင်ငံဝေးဆီက အမွေးမှာ ထူဗလဗွာနှင့် မဟုတ်။
ဗမာမလူသာအောင် နေရာတစ်ကာမှာများရာမှ မဟုတ်။
ဇာတ်တစ်ဖြာ ပတ်ကာပိုးပါလို့ မဟုတ်။
ဘေးက တစ်ငွေ့ငွ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းတွေ့ရမှာမို့ မဟုတ်။
တို့ဗမာ မြိုင်တိုင်းရယ် နယ်တစ်ကာ၌ မဟုတ်။
ရက်စက်သူ မျက်နှာဖြူတစ်သင်းတို့မှာ မဟုတ်။
တစ်ကဲ့အချက် ရှက်ဖွယ်ရာကိုစော မဟုတ်။
ကျွန်တော့်ဘွဲ့လက်မှတ်ပုံကို တမြန်နှစ်က ဒီနေ့မှာပြန်ရတယ်။ တိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးရစဉ်က ဒါမျိုးတွေကို သတိမရပါ။ အသက်လုပြီးသာ ပြေးခဲ့ရတာ။ ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစု လိုက်လာကြတော့လည်း မိတ္တူသာယူလာနိုင်တယ်။ အခု တူတယောက်က လှမ်းပို့တယ်။
ကျွန်တော့်ဘွဲ့နံပါတ် ၅ဝဝ ကိုမမေ့ပါ။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်လည်း အလွတ်ရတယ်။ ကျောင်းစာတွေ အတော်များများကို မမေ့သေး။
ဘွဲ့လက်မှတ်မပါလည်း ဆေးပညာကို မမေ့ပါ။ မမေ့တဲ့ မြန်မာစာသတ်ပုံထောက်ပြတာကို ရန်လုပ်တယ် အထင်ခံရတယ်။
လက်မှတ်ရှိတဲ့သူ၊ ကုလားထိုင်ရှိတဲ့သူပြောတာက အမှန်လို့ထင်နေကြတယ်။
နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်းစာတွေ မနှစ်ကလောက်တော့ မများသေးပါ။ ဆုတောင်းစာတွေလာရင် တောဘုန်းကြီးကျောင်းကို သတိရတယ်။
ဆွမ်းလောင်ပွဲတွေမှာ ဟိုအိမ်ကဆွမ်းဟင်းတမျိုး သည်အိမ်ကတမျိုး လောင်းလှူကြတယ်။ တောမှာ ရတဲ့အသားဟင်းကို အိမ်တိုင်းလိုလိုက ဆွမ်းဟင်းလုပ်ကြရတာ။ ဟင်းချက်နည်းလက်ရာကတော့ မတူကြပါ။ နနွင်းမှုံ အနည်းအများမတူ။ အစပ် ပါ မပါ မတူ။ အရည်နဲ့ ဆီပါတာမတူ။ အရောအနှောထည့်တာလည်း မတူကြပါ။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဘုန်းပေးရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ခုခေတ်တော့ သိပ်မသိပါ။
ခုခေတ်ဆုတောင်းစာတွေက ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကြတာ မဟုတ်။ ဆိုင်ကနေ ဝယ်ကြတာ။ ဆိုင်ကလည်း များများရှိပုံမရ။ ဆုတောင်းစာတွေ၊ ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေက ထပ်နေတယ်။ ဝက်သားဆီပြန်တွေချည်းပဲ။ မနက်ပြန်ညပြန် အီနောက်နေတာပဲ။
အိပ်မှာပြုတ်တဲ့ပဲက တခွက်တလေသာပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ထောင်းထားတဲ့ ငရုတ်သီးကလည်း မနည်းလိုက်ရှာရတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လက်နဲ့ လုပ်တတ်တဲ့သူ အတော်ရှားသွားပြီ။ အကုန် အတုတွေချည်းပဲ။
မြန်မာပြည်မှာလို ကန်တော့ခြင်းအမှုနဲ့ တိတိကျကျတူတာ တခြားမှာ မရှိပါ။ သူများတွေဆီမှာ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ သဘောသာ များတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာရေးအရရော ယဉ်ကျေးမှုအရပါ ကန်တော့ကြတယ်။ ရတနာသုံးပါး၊ အနန္တငါးပါး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို လက်အုပ်ချီပြီး ကန်တော့ကြတယ်။ ထိခြင်းငါးပါးလို့လည်း သင်ကြာပေးတယ်။
စင်ပေါ်ကနေ ဖျော်ဖြေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ပရိသတ်ကို လေးစားသမှုနဲ့ လက်အုပ်ချီကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်လက်ရှိအဖြစ်က တမျိုး။ မေးခွန်းတွေမှာ ကန်တော့ပါနဲ့စရတာက တဝက်ကျော်လောက်ပါတယ်။ မျိုးပွားလမ်းနဲ့ အညစ်အကြေးနဲ့ ဆိုင်တာတွေ ဖြေရတဲ့အခါ။
ကျွန်တော်ရေးနေရတဲ့ ကန်တော့ပါက တောင်းပန်ပါတယ်၊ ခွင့်လွှတ်ပါသဘောဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို Pardon စာလုံး သဘောဖြစ်တယ်။ အပြစ်လွှတ်ပါလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
Proskyneo ခေါ်တဲ့ ဂရိစာလုံးကို ခရစ်ယန်ကျမ်းစာထဲမှာ ခရစ်တော်ရှေ့မှာ ဦးနှိမ်ချခြင်း၊ ကိုးကွယ်မှုပြုခြင်းလို့ သုံးနှုံးပါတယ်။
ကျွန်တော့်အရင်အဖြစ်က တမျိုး။ ပြည်ပနိုင်ငံရေးလုပ်နေစဉ်က အခမ်းအနားတွေမှာ သဘာပတိအဖွဲ့နဲ့ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲမှာ တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အတူတွဲထိုင်ရတတ်တယ်။ ကျွန်တော်က စာရင်းဖတ်ကြည့်ပြီး တခါတခါ မတက်ခဲ့ပါ။
How to Eat for Better Blood Sugar ဆီးချိုသမား အချိုဘယ်လောက်စားမလဲ
အခုစာက သူများတိုင်းပြည်ကဆေးပညာစာကို ကိုးကားရေးတာပါ။ သူတို့ဆီမှာ စားတာသောက်တာက ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ အတော်ကိုမတူပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆီလျှော်အောင်တော့ ကြိုးစားရေးပါမယ်။
လူတိုင်းဟာ နေ့တိုင်း အချိုဓါတ်စားကြရတယ်။ သကြားလို့လည်းခေါ်တယ်။ ဂလူးကို့စ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ သကြားနဲ့ ထန်းလျက်မှာသာမဟုတ်ပါ။ အစားအသောက် အတော်များများမှာ အဲဒီအချိုဓါတ်ပါတယ်။
အချိုဓါတ်သွေးထဲရောက်လာတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ကနေ ထိန်းပေးတယ်။ အဲဒီစနစ်မှာ ချို့ယွင်းနေသူ ဆီးချိုရောဂါရတယ်။
ဆီးချိုရှိနေသူ အစားအသောက်ကို သည်လိုခွဲခြားပါ။
၁။ အသီးအရွက်တွေကရတဲ့အချိုဓါတ်က ၅၀% ရှိပါစေ။
၂။ ပရိုတင်းဓါတ် (အသား-ငါး-ဥ-ပဲ) ၂၅% နဲ့
၃။ ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း ကရတာလည်း ၂၅% ရှိပါစေ။
၄။ အသီးတမျိုးမျိုးလည်း ပါပါစေ။
အဲဒီအစားအစာတွေကရတဲ့ အချိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပြောတာလို့ သတိပြုရပါမယ်။
ပူပူနွေးနွေးသတင်းလေးတခုအတွက် ကာတွန်းတခုဖတ်ရတယ်။ အရိုးဆူးမယ် တဲ့။ အဓိပ္ပါယ်ကောင်းပါတယ်။ ဆူးနဲ့ စူး သတ်ပုံလွဲနေတယ်။
မေးခွန်းတွေမှာ စူးကို ဆူးလို့၊ ဆူးကို စူးလို့မှားရေးနေကြတယ်။
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မကအသက်၂၄ ပါ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ် အိမ်ထောင်ကျပြီးတည်းက တခါတလေကျရင် မိန်းမကိုယ်က ဆူးပြီးအောင့်ပါတယ် အိပ်နေတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်တာပါရှင့် ဘာဖြစ်တတ်လဲဆရာ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါရှင့်
၂။ ဆရာခင်ဗျ ငါးရိုးဆူးနေလို့ လမ်းညွှန်ပြပါခင်ဗျာ လေးစားစွာဖြင့်
၃။ ဆရာရှင့် သမီးလေးက တနှစ်နဲ့ ၇လပါ ငါးအရိုးဆူးနေလို့ပါဆရာ။ အရေးပေါ်ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်။ တောမှာနေတာဆိုတော့ ဘယ်ကိုမှသွားလို့မရပါ။ အကူအညီတောင်းပါတယ်ရှင်။
၄။ ကျွန်တော် အခုတလော လျှာအောက်က အသားက ဆူးဆူးပြီး ယားနေပါတယ်ဆရာ။
၅။ ဆရာ သမီးက ၃၃နှစ်၊ ဘယ်ဘက်ရင်အုံနားက တခါတခါ ဆူးပြီးနာတယ်ဆရာ။
၆။ ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်။ သမီးအသက်က၂၆ နှစ်ပါရှင့်။ သမီးမိန်းမကိုယ်က ဆူးဆူးနေတယ်ဆရာ။
ဆူးခြုံ (ဆူးချုံ) ထဲမှာ ငှက်ရှိသည်။
ဆူးလှည်းကြီးလိုပဲ ဟိုငြိ သည်ငြိနဲ့
ခရာဆူးချုံ ဟိုအထဲက မျှော့နက်မည်းကြီး တွယ်တတ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ မုံရွာမှာ ငယ်ငယ်က ဆူးလေပေါတယ်။ ပုလဲမှာတော့ ကန္တာရဆူးပေါတယ်။ မြို့သာမှာ ရှားဆူးပေါတယ်။ တပြည်လုံးမှာတော့ ဆုပ်လည်းစူး စားလည်းရူးတွေပေါတယ်။ No Smile!
ရေးထားတာ ၆ နှစ်ကျော်ပြီ။
ပါးစပ်ဟလိုက်ပြီး အပြုံးမျက်နှာက လှနေတယ်ဆိုတာ ဖြူဖွေးညီညာနေတဲ့သွားနဲ့ မပြည့်စုံပါ။ သွားဖုံးတွေလဲ ပန်းရောင် တညီတညာတည်း သန်းနေရပါဦးမယ်။ သွားဖုံးအရောင်နဲ့ အသားရောင်က ယေဘုယျတူကြတယ်။
Periodontal Disease သွားဖုံးရောဂါရှိနေသလား။ သွားဖုံးကိုရော၊ အရိုးနဲ့ ဘေးနားက (တစ်ရှူး) တွေကိုပါ ရောဂါ ရစေတယ်။ Plaque (ပလိပ်) ခေါ်တာကနေ စဖြစ်တယ်။ ပိုးမွှားတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။ (ပလိပ်) ဖြစ်လာရင် အဲဒီအထဲမှာ ပိုးတွေအောင်းနေမယ်။ သွားဖုံး အရောင်ပြောင်းစေတယ်။
သွားဖုံးအရောင်မည်းတိုင်း ကျန်းမာရေးကြောင့် မဟုတ်ပါ။ မျိုးရိုးလိုက်ပြီး သွားဖုံးမည်းတာလဲ ရှိတယ်။ အရောင် ညိုလာ၊ မည်းလာတာဟာ Melanin (မယ်လနင်) ခေါ်တဲ့ ရောင်ချယ်တွေ ရှိသင့်တာထက် များလာလို့ ဖြစ်တယ်။ Melanin ဆိုတာ နေရောင်ထိရင် ပိုလာတယ်။ Addison’s disease, peutz jeghers syndrome, von recklinghausen’s disease ရောဂါတွေ ရှိနေရင်လဲ မယ်လနင်များနေမယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သူတွေမှာ အရောင် ရင့်နေမယ်။ ခံတွင်းရောဂါတွေကနေလဲ သွားဖုံးအရောင် ပြောင်းလဲစေ၊ မည်းစေနိုင်တယ်။ ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးလိုရင်ဖြစ်မယ်။ Minocycline ပိုးသေးဆေး၊ ငှက်ဖျားဆေး၊ Tricyclic antidepressants စိတ်မကျဆေးတွေကနေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
၁။ အမည်းရောင်ပြောင်းတာဟာ အပေါ်ယံမှာသာဖြစ်တယ်။ အပေါ်လွှာကို ခွဲစိတ်နည်းနဲ့ ဖယ်ထုတ်လိုက်ရင် နဂိုပန်းရောင် ပြန်ပေါ်လာမယ်။ ဒီနည်းကို အများဆုံးလုပ်တယ်။ ထုံဆေးနဲ့လုပ်မယ်၊ ဆေးရုံတက်စရာ မလိုပါ။ ၁-၂ ရက်နဲ့ ကောင်းလာတာ တွေ့ရမယ်။ ၅-၆ လနေရင် အမည်းရောင် ၂ဝ-၃ဝ% ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ လိုအပ်ရင် ထပ်လုပ်နိုင်တယ်။
၂။ သွားဖုံးအရောင် မည်းနေတာက ရောဂါကြောင့် မဟုတ်ရင် Laser-based gum lightening treatments လေဆာသုံး ကုသနည်း ဆိုတာရှိတယ်။ တနာရီသာကြာမယ်။ တခါတည်းနဲ့ရတယ်။ ပြန်မပေါ်ဘူး။
၄။ တခြားဆေးပေးကုသနည်းတွေက မသေချာပါ။
ကိုယ့်သဘာဝအတိုင်းသာ ကျေနပ်နေတာလည်း ကောင်းတယ်။
၁။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် ကျွန်မအသက်က ၃၇နှစ်ပါ ကျွန်မသားက အသက် ၃လနှင့် ၂၇ရက်ရှိပါပြီ ခုသားသားပါးမှာ အကွက်ဖြစ်နေတာလေးသိချင်လို့ပါရှင့် တချို့ကနို့ပွေးလို့လည်းပြောကြတယ် ဖြစ်တာ ၂ပတ်ကျော်ရှိနေပြီး ပွားလာပါတယ်ရှင့် ဆရာ့ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုလေးသိချင်လို့ပါရှင့်။
၂။ မင်္ဂလာပါ ဆရာ သားလေးအသက် ၃လနဲ့ ၈ရက်ရှိပါပြီ။ ရိုးရိုးမွေးတာပါ။သားလေးမှာ G6PD ရှိပါတယ်။ သားလေး မျက်နှာမှာဖြစ်နေတဲ့နို့ပွေးတွေပါ သားလေး ၂လသားကတည်းက အခုထိ မပျောက်ကင်းသေးဘူးဆရာ။ ဆေးခန်းတခု သွားတော့ ပွေးလိမ်းဆေးပေးလိုက်တယ်။ ပိုဆိုးလာလို့ ဆေးခန်းတခုထပ်သွားတော့ SKAN DID ပေးလိုက်တယ် အဲ့ဒါလည်း မသက်သာလို့ သမီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ ကူညီပေးပါဦး။ သမီးအစားရှောင်ပေးရင် ပျောက်ကင်းနိုင်မလား။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျနော်သားက ၂လနဲ့ ၂၄ရက်သားပါဆရာ။ ဆောင်းတွင်းမို့လားတော့မသိဘူးဆရာ။ ကလေးက အသားတွေ အရမ်းပတ်တယ်ဆရာ။ Baby mild double milk cream တော့ လိမ်းပေးပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမဲ့ မသက်သာပါဘူးဆရာ။ ကလေးက အသားတွေယားလို့ လက်နဲ့ပွတ်တာ မျက်နှာတွေလဲရဲနေတာပါပဲ။ အဲဒါ ဘာဆေး လိမ်းရမလဲ လမ်းညွန်ပေးပါဆရာ။
နို့ပွေးကို Ringworm fungus လို့လည်းခေါ်တယ်။ နို့စို့ရင်းထိစပ်တဲ့ ပါးနေရာမှာ နီရဲလာရင် နို့ပွေးဖြစ်ဖို့ များတယ်။ မျက်နှာမှာ မဟုတ်ဘဲ တခြားနေရာမှာဖြစ်ရင် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကနေ ကူးလာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆော့တဲ့အရွယ်ဆိုရင် မြေကြီးကနေ ကူးလာတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကစားစရာတွေကနေလည်း ကူးလာတတ်တယ်။
မှက္ခရုနာဖြစ်တဲ့ပိုးနဲ့ အတူဘဲ။ နို့ပွေးက သူ့အလိုလိုပျောက်ပါတယ်။ မိခင်နို့ကို ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး သန့်ပေးပါ။ ရေ + ဆပ်ပြာနဲ့ သန့်ပြီးရင် ခြောက်အောင်လုပ်ပြီးမှသာ အပေါ်အဝတ်ဝတ်ပါ။ မှိုတွေက ပူနွေးလှောင်နေတာကို ကြိုက်တယ်။ ကလေးငယ်မှာ အလိုလို ပျောက်တာများတယ်။
ပွေးသေချာရင် Clotrimazole 1-2% နဲ့ Miconazole 1-2% ဆေးအလွယ်ဝယ်လို့ ရတယ်။ Ring Guard လိမ်းဆေးလည်း ရှိတယ်။ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ပါးပါးလိမ်းရတယ်။ အမြင်အရပျောက်ပြီးနောက် တပတ်ကြာအထိလိမ်းပါ။ ဆေးလိမ်းပေးတဲ့ လက်ကို ဆေးပါ။ တချို့ ၄ ပတ်အထိကြာတယ်။ စားဆေးမလိုလောက်ပါ။ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး ပိုလုပ်ပါ။ ဆေးလိမ်းရင် မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့နောက် တပတ်ကြာအထိ လိမ်းရတယ်။
နို့ပွေးလို့ပဲခေါ်ကြတဲ့ Atopic eczema ဆိုတာက နှင်းခူနာတမျိုးဖြစ်တယ်။ မကူးစက်ပါ။ ပျောက်ခဲတယ်။ အဖြစ်များတယ်။ ပွေးမဟုတ်။ မတည့်တာတခုခုကနေ ဖြစ်စေတယ်။ ဥပမာ ဆပ်ပြာ။ ဖုန်။ အဝတ်အစား။ တိရိစ္ဆာန်အမွေး။ စားစရာ။ ယားလို့ ကလေးမအီမသာ ဖြစ်မယ်။ ကုတ်လို့ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်နိုင်တယ်။
ပျောက်အောင် ကုမရ။ ဆောရီး။ ကလေးအသက် ၅-၆ နှစ်တွင် အလိုလို ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ တချို့က ကြီးတဲ့အထိ မပျောက်။ ဆောရီး။
မတည့်တာသိရင် ရှောင်ပါ။ Moisturizer လိမ်းနိုင်တယ်။ အလှဆီလိမ်းနိုင်တယ်။ တချို့တော့ စတီရွိုက်လိမ်းဆေ Hydrocortisone 1% တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်၊ ၁ ပတ်လိမ်း၊ ၁ ပတ်နားလိမ်းရတယ်။ Beprosone 0.05% ကို ၃-၅ ရက် ပါးပါး လိမ်းနိုင်တယ်။ ပိုးဝင်လို့ ခပ်ဝါဝါအဖတ်ဖြစ်တာအတွက် Bactropam လိမ်းဆေး ၁ နေ့ ၃ ကြိမ်။
၁။ သန္ဓိဌာန် နဲ့ သန္နိဌာန် ဘယ်ဟာမှန်ပါသလဲ ဆရာ
၂။ ဆရာ ဒီစာကရော အမှန်လားသိပါရစေ။
မြန်မာအဘိဓာန်မှာတော့ ဓိဋ္ဌာန် = ကြိယာ။ အဓိဋ္ဌာန်ပြုသည်။
၃။ ပို့စ်နဲ့တော့မဆိုင်ပေမဲ့ မေးပါ့ရစေ ဆရာ။ သံဒိဌာန်လား၊ သံဓိဌာန်လား သိချင်လို့ပါဆရာ။
ကျွန်တော်သမီးလေး အသက်က ၅နှစ်ပါ သူမှာမွေးရာပါ နားရဲ့ အနီးနားက အပ်ရာလောက်အပေါက်ကလေးကနေ ပြည် ထွက်လာပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေပါတယ် စိုးရိမ်ရလားဆရာ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ခွဲစိပ်ရမလား မနေ့က ကလေးကပြောမှ ပြည်တည်နေတာသိရပါတယ်
ပြည်ဆိုတာ ဘယ်မှာရှိရှိ ထွက်အောင်လုပ်ရမယ်။ ပိုးသေဆေး + အနာသက်သာဆေး + ဆေးထည့်တာလိုနိုင်။
Preauricular sinus လို့လည်းခေါ်တယ်။ မွေးရာပါဖြစ်လို့ congenital auricular fistula လို့လည်းခေါ်တယ်။ တချို့မှာ အပေါက်လေးမဟုတ်ပဲ အိတ်ဖြစ်နေလို့ preauricular cyst ခေါ်တယ်။ အချိုင့်ကလေးလိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
တချို့ကိုတော့ Surgical excision ခွဲစိတ်ပေးရတယ်။ ထွက်တဲ့ပြည်က နံတယ်။
Paracetamol and Azithromycin ကလေးဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/paracetamol-and-azithromycin.html
Wound Dressing အနာဒဏ်ရာ ဆေးထည့်နည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/wound-dressing.html
ဘာဆေလည့် ပြောပါ ဘလိုရောဂါအတွက်ထိုရတာလည့် ဆရာ
ဘလို လို့ရေးတာ မေးတဲ့သူရဲ့ အဘလိုလား၊ သူ့ဘဘလိုလားလို့ စဉ်းစားနေရတယ်။ ဘယ်လို ဘယ်ကဲ့သို့ မည်ကဲ့သို့ လို့သာရေးရတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလည်း ၄-၅ ကြိမ်ရေးတင်ထားတယ်။
အဘ နဲ့ သမီး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/11/blog-post_75.html
မြန်မာစာသတ်ပုံအကြောင်း နေ့တိုင်းရေးပါတယ်။ မေးခွန်းတွေမှာ အမှားတွေပါနေလို့။
သတ်ပုံမမှန်တဲ့ စာရေးဆရာတွေရှိတယ်။ သတ်ပုံလွဲတဲ့ ကဗျာဆရာတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပေါ်လစီသတ်ပုံနဲ့ စာတွေကို ဘယ်တော့မှ မဖတ်ပါ။
ပေါ်လစီအရသတ်နည်းမှန်တဲ့သူကို ကန်တော့သူရှိတာ တွေ့လာရတယ်။
စာရေးသတ်ပုံ မှားနေတာကိုတော့ ပြင်ရင် မှန်သွားတယ်။ သတ်ပုံနဲ့ သတ်နည်း မတူပါ။
ကမ္ဘောဒီးယားမှာ ကင်းလင်ဖီးလ်သာမကာ ကင်လင်းထရီးလည်းရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကင်လင်းစီတီးတွေရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အများဆုံး။
သမိုင်းစာတွေ ဖတ်စေချင်လို့ ရေးပါတယ်။ သမိုင်းဖတ်ရင် မှန်တဲ့သမိုင်းစာသာဖတ်ပါရန်လို့လည်း အကြံပေးတယ်။
သမိုင်းရေးနေကြတာတွေကိုလည်း ဖတ်စေချင်သေးတယ်။ သမိုင်းပြုစုသူတွေကိုပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးနေတာကို ပြောတာ။
တမျက်နှာမှာ ဟုတ်လှပြီ။ နောက်တရွက်လှန်တော့ အော့။ ကန်တော့ပါ။
နှစ်သစ်ကူးပြန်တော့မယ်။ ဆုတောင်းပေးသူတွေ ဆုတူရပါစေ။ ကျွန်တော့်လက်တဖက်ကို နိုင်ငံရေးအတွက်သုံးပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာ ဆုတောင်းတာ သိပ်မတွေ့မိသလို ဆုပြန်ပေးစရာလဲ ရှားပါးလှတယ်။
ကျွန်တော် ပြည်ပကိုထွက်ပြေးရတော့ ပုလဲကအိမ်လေးကို စစ်အစိုးရကချိတ်ပိတ်လိုက်လို့ မိသားစုက မုံရွာသွား အိမ်ငှားနဲ့ နေကြရတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေက ကောင်းကြတယ်။ အဒေါ်ကြီးတယောက်က ဒေါ်မြမြအေးကို အကြံပေးတယ်။ အေးရေ မနက်မှာ သူများတွေမနိုးခင် ထ၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေ ပြီးစီးအောင်လုပ်ထား။ သူများတွေ အိပ်ယာထလောတော့ ဘာမှ မလုပ်ရသလိုနေတဲ့။ သူ့ကြည့်လိုက်ရင် သနပ်ခါးအဖွေးသားနဲ့ အဝတ်အစားက သပ်သပ်ရပ်ရပ်။ ချက်စရာပြုပ်စရာတွေက ပြီးနေပြီ။ နေအိမ်လေးလည်း သန့်ရှင်းလို့။
ကနေ့ပြည်တွင်းမှာ အတန်အသင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာလေးတွေအတွက် မနက်မလင်းခင်က ရှင်းလင်း သုတ်သင်ပေးခဲ့ကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြရမှာပါ။
အီစထိုဂျင်ကို အမျိုးသမီးဟော်မုန်းလို့လူသိများတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာသာရှိတာတော့ မဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးတွေမှာ မိန်းမနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေဖြစ်လာစေဘို့ အီစထိုဂျင်ဟော်မုန်းလိုတယ်။ မျိုးပွါးဘို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်။
မျိုးဥအိမ်တွေကနေ Estrone, နဲ့ Estradiol အများဆုံးထုတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ Estriol ကို အချင်းကနေ ထုတ်ပေးတယ်။ ကျောက်ကပ်အထက်မှာရှိတဲ့ အဒရီနယ်လင်ဂလင်းကနေလည်းထုတ်ပေးတယ်။ အဆီတစ်ရှူးတွေကပါ ထုတ်ပေးတယ်။ ရင်သားနဲ့ သားအိမ်တွေကိုသာမက ဦးနှောက်၊ အသည်း၊ နှလုံးတွေကိုပါသက်ရောက်တယ်။ သူ့ကြောင့် ရာသီဖြစ်စဉ်မှာ သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွှာကို ကြီးထွားလာစေတယ်။
အခုရက်တွေမှာ သူများတွေတင်တဲ့ ထွီတွေ ဖတ်နေရတယ်။ ကန်တော့။
ကျွန်တော် အင်နယ်လ်ဒီပါတီထဲကို ပါတီစဖွဲ့ကတည်းကဝင်ပြီး ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ နိုင်သလောက်ဝင်လုပ်တယ်။ အခုထိ။
ပါတီတခုတည်းကလူတွေနဲ့ ပြည်ပထွက်တယ်။ ၂၄ နှစ် ကြာခဲ့တယ်။
အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်လောက် ဘရူးတပ်စ်လိုလူတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတယ်။ တခြားပါတီ အဖွဲ့ထဲကလူလည်းပါတယ်။ ကိုယ့်ပါတီထဲကလူတွေလည်း ပါတယ်။
အစကတော့ အဟုတ်မှတ်တယ်။ အထင်ကြီးတယ်။ တာဝန်ပေးတယ်။ အားကိုးတယ်။ နောက်တော့ ဘရူးတပ်စ်ဇာတ် ခင်းတယ်။ ကိုယ်က ညံ့တာကိုး။
ကျွန်တော်က ဆီဇာ မဟုတ်ပေမဲ့ ဇီဇာကြောင်တယ်။ ကားလမ်းဘေး ရွေးစရာဆိုင်ကလည်း တခြားမရှိ။
Mood swings during menopause သွေးဆုံးချိန် စိတ်မူပြောင်းခြင်း
ဆရာမင်္ဂလာပါ။ စိတ်ရောဂါဟုတ်မဟုတ်မေးချင်လို့ပါဆရာ။ အသက်က ၅၀ထဲမှာပါ။ အမေပါ။ တယောက်တည်း ဟိုးအရင်ငယ်စဉ်ကအကြောင်းအရာ (အထူးသဖြင့် စိတ်နာစရာတွေ) ထိုင်ပြောတတ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးပေါက်ရာ ပြောတာမျိုးပါ။ ရယ်စရာရှိရင်လည်း အလွန်အကျူးရယ်ပါတယ်။ စိတ်တိုစရာမပါလည်း ဟိုးအရင်က စိတ်တိုစရာကိုပြောပြီး တတွတ်တွတ်ရွတ်ပြီး စိတ်တိုနေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပြေလျော့အောင် ဘယ်လိုမှ ချော့လို့လဲ မရတတ်ပါဘူး။ ထိုစိတ်နာတဲ့အကြောင်းအရာကို မပြီးဆုံးတတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ပြောပြီး နောက်နေ့လည်း ဒီအကြောင်းအရာပါပဲ။ တခြားဘာကိုမှ မှတ်ခိုင်းလို့လဲ မရပါဘူး။ သူမှတ်မိချင်တာဆိုလည်း သူတယောက်တည်း ထိုင်ပြောပြောနေတာပါပဲ။ တခါတလေ သူ့အကြောင်းသိလို့ သူပြောသမျှ ဘယ်သူမှ နားမထောင်ရင်လည်း စိတ်တိုဒေါသတကြီးထွက်ပြီး သောင်းကျန်းတတ်ပါသေးတယ်။ အဲဒါစိတ်ရောဂါလို့ခေါ်နိုင်ပါသလား။ ထမင်းစားရေသောက် ကျန်တာအကုန်သိပါတယ်။ တခြားဟာတွေတော့ ဘာမှ အသစ်ထပ်သင်ပေးလို့ မရတော့ပါဘူး။ သူမှတ်မိချင်တာပဲမှတ်မိတာပါ။ စိတ်ရောဂါဆိုရင် ဘယ်လိုကုသရမလဲဆရာ ဒါမှမဟုတ် ရေရှည်တိုက်လို့ရမယ့်ဆေးဝါးများရှိရင်လမ်းညွှန်ပေးပါ
အသက် ၅၀။ သွေးဆုံး မဆုံး မသိ။ သွေးဆုံးကာနီးချိန် စိတ်မူပြောင်းတာဖြစ်တတ်ကြတယ်။ အလိုလိုသက်သာလာမယ်။ လိုအပ်သူကို စိတ်အထူးကုဆရာဝန်ပြသင့်တယ်။
သွေးဆုံးရောက်သူ ၂၃% လေးပုံတပုံလောက်ဟာ စိတ်မူပြောင်းတာ ဖြစ်ကြတယ်။ သိသာတဲ့အပြောင်းအလဲမျိုးဖြစ်တာ များတယ်။
Irritability စိတ်တိုခြင်း ၇၀% ဖြစ်တယ်။
Depression စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း ၂၀% ဖြစ်တယ်။
Insomnia အိမ်ပျော်ဆာ ၄၀-၅၀% ဖြစ်တယ်။
Crying episodes ငိုမယ်။
Memory loss မှတ်သားမှု နည်းတယ်။
Menopause (1) သွေးမဆုံးခင်နဲ့ သွေးဆုံးရင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2018/08/menopause-1.html
Menopause (2) သွေးမဆုံးခင်နဲ့ သွေးဆုံးရင် ဖြစ်ချင်တာတွေ (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/menopause-2.html
Healthy Ladies အမျိုးသမီးကြီးတွေ ကျက်သရေရှိကြပါစေ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/healthy-ladies.html
မွေးနေ့ရှင် အငယ်ဆုံးသားက ကုလားဆိုင်ကနေဝယ်လာတာ။ သူကမြန်မာပြည်မှာ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတာနဲ့ အိန္ဒိယကို ရောက်လာသူ။ ကုလားပြည်ကအစားအစာတွေနဲ့ ၈ နှစ်ကြာ ရင်းနှီးခဲ့သူ။
၂၄ နှစ်ကြာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒေလီက မဆလာကို နည်းနည်းလေးမှ မကြိုက်။ နယူးဒေလီလို့ပြောရတာက အိန္ဒိယပြည်က ကြီးပြီး နေရာဒေသတွေမတူရင် အစားအသောက်လည်း မတူကြပါ။ တောင်ပိုင်းကအစားတွေတော့ စားနိုင်တယ်။ ဘုံဘေဘက်ကလည်း မဆိုးပါ။ အရှေ့မြောက်ပြည်နယ်တွေကတော့ မြန်မာပြည်ကအတိုင်းပဲ။ မြောက်ပိုင်းက အစားအစာတွေကို ခံတွင်းမတွေ့လှ။ အနံ့ကို ပိုမကြိုက်တာ။
ဆိတ်သားကို သရက်သီးနဲ့ချက်တဲ့ဟင်း။ နံပြားနဲ့ ထမင်း။ မဆလာနံ့ကင်းတာ ရွေးဝယ်လာတာတဲ့။